Jamaica Tourism iji rite uru site na $ 70 nde ebe mgbazinye ego
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Jamaica » Jamaica Tourism iji rite uru site na $ 70 nde ebe mgbazinye ego
Njem azụmahịa • Caribbean • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • investments • Akụkọ gbasara Jamaica • News • Iwughachi • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ dị iche iche
Njem nleta JJamaica
Minista njem nlegharị anya nke Jamaica Hon. Edmund Bartlett ekwuputala na ego nkwalite njem nlegharị anya (TEF) esorola Jamaica National Small Business Loans Ltd (JNSBL) banye Memorandum of Understanding iji mee ka nde $ 70 nweta ndị na-arụ ọrụ na mpaghara mpaghara njem njem ala, ndị nwere mmetụta ọjọọ. site na ọrịa COVID-19.
Onye Minista njem nlegharị anya nke Jamaica kwupụtara atụmatụ ikpeazụ maka atụmatụ enyemaka ọhụrụ nke mba ahụ maka ndị ọrụ njem.
Mbinye ego ga -adị na ngalaba JN ọ bụla malite na July 1, 2021.
A ga-enye ọnụego ọmụrụ nwa maka mgbazinye ego ndị a na pasent efu, enweghị ụgwọ nhazi, yana nkwụsị ọnwa asatọ n'isi.
Mịnịsta Bartlett kwupụtara nke a ka ọ na -enye mmelite maka mgbake nke ngalaba njem na nzuko omeiwu ụnyaahụ (June 29).
“Obi dị m ụtọ ikwuwapụta na anyị emechaala atụmatụ maka atụmatụ enyemaka ọhụrụ anyị maka ndị ọrụ njem. Ego nkwalite njem nlegharị anya (TEF) etinyela ntụtụ nke $ 70 nde iji kwado ndị na-ahụ maka njem ụgbọ njem na-ata ahụhụ nke ukwuu site na mbibi nke ọrịa COVID-19 na oke ndakpọ nke njem na afọ gara aga, ”Minista Bartlett ekwuputara.
“Mbinye ego ndị a, enwere ike ịnweta ya na ngalaba JN ọ bụla malite na July 1, 2021, a ga -enyekwa ya na ọmụrụ nwa pasent efu; nwere ọnwa 8 maka onye isi ụlọ akwụkwọ yana oge nkwụghachi ụgwọ kachasị nke afọ atọ, na-enweghị ụgwọ nhazi, "Minista Bartlett kwuru.
Onye ozi Bartlett kwupụtara ụlọ ọrụ mgbazinye ego mbụ n'oge mmechi mmechi arụmụka ya na nzuko omeiwu na June 15.
Ọ kọwara na enwere ike ịnweta ya site na JNSBL ma ga -enye ndị na -agbazinye ego ohere ị nweta ihe ruru J $ 1 nde kwa ọnwa kwa ọnwa ruo ọnwa iri na abụọ.
Minista Bartlett kọwakwara na: "Ekwekọrịtara na a gaghị echekwa mgbazinye ego ahụ, n'ihi na nsogbu ndị metụtara ijikọ mgbazinye ego ahụ ga -egbochi ụfọdụ ndị na -arụ ọrụ ịbanye na akụrụngwa ahụ, ọkachasị ndị nwere ụdị enyemaka a kacha dị mkpa iji nọgide na -adigide. . ”
Na mmekorita ya na JNSBL, emeela ka ngwa anamachọihe dị mfe, na iji mee ka ndị na -achọ akwụkwọ dịkwuo mfe, TEF enwetala ọrụ nke ndị na -edekọ ego enyere aka nyere ndị na -achọ akwụkwọ aka n'ịkwadebe Nkwupụta Ego Ego nke achọrọ dị ka akụkụ nke ngwa ahụ.
Minista Bartlett kwupụtara na ndị na -edekọ ego enyerela ndị ọkwọ ụgbọ ala 40 aka kemgbe Saturday, June 26th, 2021, na -enyere ndị ọzọ aka ugbu a.
Iwebata akụrụngwa mgbazinye ego na-esote arịrịọ ndị otu mpaghara njem na-arịọ maka enyemaka.
N'ime ọgbakọ mebere nso nso a nke ndị Njem Njikọ Njikọ (TLN) kwadoro, maka etu njem siri metụta mpaghara ndị ọzọ, Onye isi oche nke Jamaica Co-operative Automobile and Limousine Tours (JCAL), Brian Thelwell, mesiri ike mkpa njem ụgbọ ala na-eme njem na. kpọrọ maka nkwado ego maka ndị na -arụ ọrụ iji kwadebe ha maka mgbake ụlọ ọrụ ahụ. Ọ rịọrọ ụlọ akụ ọkachasị ka ha na -eme ebere karịa ndị nwere mgbazinye ego pụrụ iche.
Maazị Bartlett kwuru, "Ebe mgbazinye ego enyemaka COVID-19 ga-adịrị ndị otu JUTA, JCAL na MAXI ndị na-eweta ụgbọ njem ala ga-emerịrị ọtụtụ ntozu ntozu."
Ihe karịrị ndị ọrụ ụgbọ njem 5,000 na mpaghara njem emetụtala n'ụzọ na -adịghị mma site na mkpọchi amachibidoro ngalaba njem na afọ gara aga, n'ihi ọrịa na -efe efe.